HTC U12 Plus enwetaworị mmelite ọhụrụ | Gam akporosis
HTC na-ewepụta mmelite ọhụrụ emere maka ekwentị ya nke oge a, HTC U12 Plus. Ngwaọrụ a, nke amalitere na Mee, na-enwe ọ improvementsụ mmụba ọhụrụ na ngalaba kwụụrụ onwe ya na ngalaba arụmọrụ niile.
Nkwalite ngwugwu na-esokwa CryptoKitties abịa, egwuregwu na-enweghị nghọta nke anyị nwere ike iji Ether rụọ ọrụ iji zụlite, ree ma chịkọta nwamba ndị mebere. Nke a n'okpuru blockcheni Ethereum, nke abụọ kachasị ewu ewu na cryptocurrency mgbe Bitcoin. Chọpụta ihe ọ bụ gbasara!
Mmelite a amalitela iru ụfọdụ ndị ọrụ Hong Kong, dịka akụkọ dị iche iche si kwuo. Otu ihe Ọ na-abịa n'okpuru mbipute 1.25.708.3 ma tụọ 136,63 MB. Na ya, batrị na-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu iji chegbuo onwe anyị banyere chaja na arụmọrụ izugbe nke ọnụ na-akawanye mma n'ọtụtụ ebe: multimedia, ngwa na-agba ọsọ, egwuregwu, na ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na, yana mmelite ahụ, emechara teknụzụ eji arụ ọrụ na Edge Sense. Maka nke a, bọtịnụ uche nke U12 + na-aza karịa karịa na mbụ.
CryptoKitties, egwuregwu na-ewu ewu na-ewu ewu na-abịakwute HTC U12 Plus
Ndị ọrụ ndị emelitere ekwentị nwere nke a vasatail na egwuregwu ọchị. Na CryptoKitties anyị nwere ike ilekọta, ree, zụta, nakọta ma họrọ site na ọtụtụ nwamba mebere dị na ụlọ ahịa egwuregwu. Ha niile n'okpuru usoro ugwo Ethereum.
Egwuregwu ahụ dabere na usoro ngọngọ, nke amara nke ọma dị ka ngọngọ, ya mere a na-enye ya dịka nhọrọ ntinye ego na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ụwa nke Ethereum. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere ike iji ya naanị ikpori ndụ ma pụọ.
N'ikpeazụ, gbasara nkesa nke mmelite a, anyị ga-eji ndidi chere ka ọ rute na ngwaọrụ anyị, ebe ụlọ ọrụ ahụ ekwughi ihe ọ bụla gbasara otu ọsịsọ ma ọ bụ n'ụzọ ọ ga-esi gbasasịa n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC U12 + malitere inwe mmelite ọhụrụ na ọtụtụ ndozi na CryptoKitties
Ihe ngosi 9 Galaxy Note na-abata na Spain